PTC CREO Parametric Course - Kere, nyocha na ịme anwansị (1/3) - Geofumadas
Usoro PTC CREO Parametric - Design, analysis na simulation (1/3)
Jenụwarị, 2021 AulaGEO
CREO bụ ihe ngwọta 3D CAD nke na -enyere gị aka ime ngwa ngwa ngwaahịa ka ị nwee ike mepụta ngwaahịa ka mma ngwa ngwa. Ọ dị mfe mmụta, Creo na -eburu gị n'enweghị nsogbu site na mmalite nke imepụta ngwaahịa site na imepụta na gafere.
Ị nwere ike ijikọ arụmọrụ siri ike na nke egosipụtara na teknụzụ ọhụrụ dị ka imepụta ihe, eziokwu agbakwunyere, ịme anwansị ozugbo, yana imepụta mgbakwunye. na IoT iji megharịa ngwa ngwa, belata ọnụ ahịa ma melite ogo ngwaahịa. Ụwa nke mmepe ngwaahịa na -aga ngwa ngwa, naanị Creo na -enye ngwaọrụ mgbanwe ị chọrọ iji mepụta uru asọmpi wee nweta oke ahịa.
Nke a bụ nkuzi lekwasịrị anya n'ichepụta igwe site na iji sọftụwia CREO Parametric. N'isiakwụkwọ nke mbụ ya, a kọwara izugbe nke ihe eji arụpụta akụkụ, mgbe ahụ ka akọwapụtara isi ihe osise CAD, yana iwu ndị dị ka mwepu, mgbanwe na mkpochapu. Na mgbakwunye, a na -agbakwunye usoro dịka ịkpụzi oghere, fillet na chamfering ihu.
Usoro a bara uru nke ukwuu, onye ọkachamara kọwara ya nke na -eji nwayọ ewepụta iwu na ihe na -ejedebe n'inye agba, inye ngosi, mgbakọ na usoro ịme anwansị.
Usoro - Ndụ Ndụ Usoro CREO Parametric Usoro Nhazi Mechanical
Previous Post«Previous Usoro Masonry Structural na ETABS - Mọdụl 7
Next Post Adobe After Effects - Mụta MfeNext »
Agụmakwụkwọ Geographic Ozi na QGIS
Mụta iji QGIS mee ihe maka usoro mmemme Geographic Ozi na-eji QGIS. -Ndi ihe omumu i nwere ike…
Modkpụrụ Nlereanya Dị Adị - AutoDesk Recap na About3D
Mepụta ụdị dijitalụ site na ihe onyonyo, na sọftụwia na-akwụghị ụgwọ yana ya na Recap N'ime usoro a, ị ga-amụta imepụta e ...
Usoro PTC CREO Parametric - Design, analysis na simulation (2/3)
Creo Parametric bụ imepụta, imepụta na injinia nke PTC Corporation. Ọ bụ ngwanrọ na-enye ohere ịme ngosi uwe, ...